သမိုင်းဆိုတာအမြင်ကပ်ရုံသက်သက်နဲ့ဖျောက်လို့မရနိုင်ကောင်းပါဘူး၊လူသားတွေရဲ့အတ္တကိုငွေကြေးအာ ဏာ အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့သွန်းလောင်းပေးလို့ယာယီမှေးမှိန်ကောင်းမှေးမှိန်နိုင်ပေမဲ့….အမှန်တရားဆိုတာ…. တနေ့မှာ တော့ပေါ်ထွန်းလာစမြဲပါ……..
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ဆိုတာ…အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းလည်းအကောင်ထည်ဖော်ဘို့ ကိုလိုလားတဲ့ လူထုကြီးရဲ့ လူထုတော်လှန်ရေးကြီးလား………..
ကျနော် ၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံအကြောင်းကိုတင်ပြရာမှာ အကုန်လုံးကို ကျနော်မသိပါဘူး ၊ အခုကျနော်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးဟာသမိုင်းပြုစုနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ပြောပရစေ..ကျနော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရ တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းတင်ပြလိုက်ခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်…..ဒီအထဲမှာ သင်ခန်းစာယူစရာတွေ ဆင်ခြင်စရာတွေကို ရှစ်ဆယ့်ရှစ်လူထုအရေးတော်ပုံဆိုတာဘာမှန်းမသိ တဲ့…လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေ..လေ့လာနိုင်ဘို့ကိုအထူးရည်ရွယ်ပါတယ်……
ကျနော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ၁၉၈၄ မှာစရောက်တယ်၊ နေရတာက တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ဘေးမှာရှိတဲ့ အင်းဝဆောင်မှာ…အဲဒီအခါကတဆောင်လုံးဥပဒေကျောင်းသားတွေချည်းပဲထားတယ်….ကျနော်ကံကောင်း တယ်ပြောရမလားမသိဘူးတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကိုစတက်တက်ချင်းမှာပဲ..စိတ်တူကိုယ်တူသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံ ဖြစ်တယ်လေ…..အခု အင်္ဂလန်မှာရှိနေတဲ့…နံမည်ကျော် ပန်းချီဆရာ ( ပန်းချီထိန်လင်း ) ၊ အောင်လင်း ( ယခုဂျပန် ) ၊ ဇော်လင်း ( မြင်းခြံ ) သူတို့နဲ့တွဲဖြစ်ကြတယ်…ဒီအထဲမှာ ကျနော်နဲ့ထိန်လင်း တူတာက စာဖတ်ဝါသနာပါတယ်…အနုပညာကိုခုံမင်တယ်……တံငါနားနီးတံငါပြောရမလားမသိဘူး..ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်း တွေပါ ..ကျနော်တို့ဝါသနာတွေကူးကုန်ကြတယ်…..ကျနော်တို့အားလုံးဟာ…စာဖတ်ခြင်းအလေ့ မှာတော့ တော်တော်လေးကိုထုံကြတယ်…ကမာရွတ် လှည်းတန်းမှာရှိတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တွေ ဆို တာ…ကျနော် တို့ မ သိ တဲ့ ဆိုင်မရှိသလောက်ပဲ……နောက်တခုက ကျနော်တို့ကတက္ကသိုလ်အနုပညာအသင်း မှာလည်း ပါဝင် ပတ်သက်နေသူတွေဆိုတော့…..အင်းဝဆောင် အခန်းနံပါတ် ၉၃/၉၄ ဆိုတာ အနုပညာ အသင်း ရုံးခန်းကြီးလိုပဲ…..ကိုဇာဂနာ ၊ အရိုင်း ၊ ဖိုးဖြူ ၊ ကင်းကောင် ၊ စုတ်ဖွား ၊ဂေါ်ဇီလာတို့ ကအ စတော်တော်များများက….ကျနော်တို့ အဆောင် ကိုဝင်ထွက်သွားလာနေကြတာ ….တခါတခါ ကိုသူရ ခေါ် ကိုဇာဂနာနဲ့ စာပေရေးရာ ၊ အနုပညာ ကိစ္စတွေ ၊ အငြိမ့် ကိစ္စတွေဆွေးနွေးရင်း က..သူ့ရင် ထဲကပေါက် ကွဲထွက်လာတဲ့…အဲဒီအချိန်ကအစိုးရ(မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရ)ကိုမကျေနပ်တဲ့…စကားလုံးတွေကိုလည်းကြားရတတ်တယ်….တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘ၀ဟာ..ကျနော့်ဘ၀တလျှောက်လုံး မှာအလွတ်လပ်ဆုံးအပျော်ဆုံး နဲ့..အရသာအရှိဆုံး အချိန်တွေလို့ ပဲပြောပရစေ…..ကံကောင်းထောက်မစွာ…လွတ်လပ်တဲ့ကျောင်းသားဘ၀မှာ..စာပေတွေကိုလေ့လာခွင့်ရလိုက် တာကိုက နိုင်ငံရေးရဲ့ခြေလှမ်းအစလို့ပဲပြောလို့ရနိုင်မလားမသိဘူး…..
အဲဒီအချိန်ကာလက အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ မဆလ ( မြန်မာ့ဆုိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရ )ဆိုတာ…၁၉၆၂ ခုနှစ်…မှာ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်သိမ်းပြီး..တပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ အစိုးရပေါ့….ပါတီ ဥက္ကဌ ကြီးကတော့..ဦးနေ၀င်း(ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း)……..တိုင်းပြည်ကိုသူအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစ လို့…ပုဂ္ဂလိကပိုင် လုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်ပြည်သူပိုင်သိမ်း…ဆိုရှယ်လစ်စနစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကို ဆက်လက်ချီ တက် မယ်ဆိုပြီး..တံခါး ပိတ်စီးပွားရေးဝါဒကိုလက်ကိုင်ပြုပြီး…ခရီးဆက်လာ လိုက် တာ…တိုင်းပြည် ဟာ… ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဆင့်ကိုရောက်ခဲ့တယ်……လူထုတရပ်လုံးရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဟာ…..ပြောစရာစကားလုံးရှာမရလောက်အောင် အောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်လေ…တခါက အရှေ့တောင်အာရှမှာဂုဏ်တင့်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ… နောက်၂၆နှစ်အကြာမှာတော့…မျက်နှာငယ်စရာတိုင်း ပြည်ဖြစ်သွားတယ်…………..နိုင်ငံရဲ့အထွေထွေအကြပ် အတည်းကြီးဟာ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေကိုပါ ရိုက်ခပ်စေခဲ့တာပေါ့….တကယ်တော့ ကျနော်တို့ ပညာသင်ခဲ့ရတဲ့…တက္ကသိုလ်ဆိုတာ…နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်လိုက် ရင်..တော်တော်လေးကိုနိမ့်ကျသွားပါတယ်….ဒါကလည်း…လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေး စနစ်ပုံစံတွေပျက်သုဉ်းပြီး…အာဏာရှင်စနစ်ကိုသက်ဆိုးရှည်စေမဲ့…ပညာရေးပုံစံတွေကိုအာဏာရှိသူများက စိတ်တိုင်းကျချယ်လှယ်ပြီး…စီမံခဲ့တာဆိုတော့..အားလုံးဟာ..ကမောက်ကမချည်းပါပဲ…..နောက်တခုအရေး ကြီးဆုံးက…လူထုတရပ်လုံးရဲ့အထွေထွေအကြပ်အတည်းကြီးကသားသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ကျောင်း သားများကို လာရိုက်ခတ်စေခဲ့တာ အမှန်ပါ…ဒါ့ကြောင့်၁၉၆၂စစ်အာဏာရှင်များ အာဏာသိမ်းပြီး ချိန်ကစလို့ ကျောင်းသားများဟာ အံတုတော်လှန်ခဲ့ကြတာ……….
- ဆဲဗင်းဇူလိုင် ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမှု
-မှိုင်းရာပြည့်ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့စသဖြင့်ပေါ့လေ……ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်များရဲ့လူမဆန်စွာ ရက်စက်ဖြိုခွင်းမူ့တွေကြောင့် ရဟန်း ၊ ရှင် ၊လူ ၊ ကျောင်းသား ပြည်သူတွေအသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်များကိုမကျေနပ်တဲ့ ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့များဟာ ကြားထဲမှာလည်း ကျိုးကြား ကျိုးကြား ဆိုသလိုပေါ်ခဲ့ပါတယ်…ဒါပေမဲ့လူထုကြားထဲကိုပြန့်ပြန့်နှံ့နှံ့မရောက်အောင်မဆလအာဏာရှင်များဟာ နှိပ်ကွက် ခဲ့ပါတယ်…ဒီလိုနဲ့ တနှစ်ပြီး တနှစ်ကုန်လွန်လာခဲ့ရာကအစ…….
ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ….ကျောင်းသားတွေရဲ့မကျေနပ်မူ့အဆိုင်အခဲကြီးကတော့ရှိနေဆဲ….ဒါပေမဲ့ဘယ်ကစရမလည်းမသိဖြစ်နေကြတယ်….ဒီလိုနဲ့နေလာရင်းက…၁၉၈၈မတ်လမှာတော့ရန်ကုန်စက်မူ့တက္က သိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့..အရပ်သားတွေ..လဘက်ရည်ဆိုင်မှာစကားများရာကအစ…ပြသနာတွေဖြစ်ကြတယ်…ရိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်…သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များရဲ့အထိန်းအသိမ်းညံ့ဖျင်းမူ့တွေကြောင့်….ပြသနာက အေးချမ်းမသွားပဲ…ပိုကြီးထွားလာတယ်…ရန်ကုန်စက်မူ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား…ကိုဖုန်းမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့ လုံထိန်းတွေပစ်လိုက်တဲ့သေနပ်နဲ့ သေဆုံးခဲ့ကြတယ်….အဲဒီ့ဂယက်က ရန်ကုန်တက္က သိုလ်ထိပါ ကူးစက် ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်….တခါ….တန်းစီချီတက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အနီး..အင်းလျှားကန်စောင်းမှာရှိတဲ့…တံတားနီမှာ…အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခြင်းပြင်းပြင်းထန် ထန်ခံလိုက်ရတယ်…ကျောင်းသားပေါင်းများစွာကိုလည်း….အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲ့..ဖမ်းထဲ့ထားလိုက် တယ်…..ဒါကိုတော့….၁၉၈၈မတ်လကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့လို့..နောင်ကာလများမှာသမိုင်းတွင်စေခဲ့ပါတယ်…….ဒီလှုတ် ရှားမူ့မှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေထဲကတော့မင်းဇေယျ(၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင် )နဲ့ကိုဌေးကြွယ်၊လှမျိုးနောင်တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်……
၁၉၈၈မတ်လကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့ဖြစ်တော့ကျနော်ကျောင်းမှာမရှိပါဘူး…နေမကောင်းတာနဲ့ ဇာတိမြို့ကိုပြန်ရောက်နေတော့…အဲဒီ့အကြောင်းလည်းကောင်းကောင်းမသိပါဘူး…..နားရည်ဝအောင်ကြား ဘူးတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါတယ်…ဒါပေမဲ့နယ်ကနေသတင်းတွေကြားနေရတော့…ရင်ထဲမတော့တော်တော်ခံစားခဲ့ရ တာအမှန်ပါ….ကျောင်းတွေကို…ဇွန်လမှာပြန်ဖွင့်ပေးပါတယ်….ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့…ကျနော့သူငယ်ချင်း… ထိန်လင်း၊အောင်လင်း၊ဇော်လင်းအပါဝင်အနီးစပ်ဆုံးပုဂ္ဂိုတွေကကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့ထဲမှာပါလို့ဆိုပြီးကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပြီ…သူတို့ကကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာကို…မိဘတွေအသိမပေးဘူး..ဟန်မပျက် ကျောင်းလာတက်ကြတယ်…နေစရာအဆောင်ကမရှိတော့ ကျနော့်အခန်းမှာပဲစုနေကြတယ်…( အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ကစတုတ္ထနှစ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ တစ်ယောက် ခန်းတွေရတယ်)..နောက်တော့…အဆောင်မှူး က.ကျနော့်ကိုခေါ် သတိပေး တယ်….ကျောင်းထုတ် ခံထားရတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလက်ခံမထားဘို့ပေါ့…ကျနော် ထင်ပါ တယ်.. အဆောင် မှူးက လည်း တာဝန် အရသာပြောတာ ပါ….လက်တွေ့…သူငယ်ချင်းတွေအသာလေးဝင်နေတာ ကို သိပေမဲ့လည်း…မသိချင်ဟန်ဆောင်နေရှာပါတယ်….
ကျနော်တို့ကကျောင်းကိုသာလာကြတာပါ…ကျောင်းတက်စာသင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူး..တယောက်မှမရှိ တော့ ဘူး…လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဘို့ကို စတင်စိုင်းပြင်းဘို့ကိုပဲ…အားသန်နေကြတယ်…..ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မ ကြာသေး ခင်ကမှပူပူနွေးနွေးကာလက မှ…ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေသွေးမြေကျခဲ့ ရပြီ…ကျောင်း သားပေါင်း ရာနဲ့ချီအင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ထဲမှာလည်းရှိနေဆဲဆိုတော့…..တော်တော်များများ က…စာသင်ကြားရေးကိုစိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး…ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝန်းထဲမှာဆို ပိုသိ သာတယ်….ကျောင်း သားတွေတော်တော်များ များက စာသင်ခန်းတွေထဲမှာ မရှိကြပဲ….စာသင်ခန်းပြင်ပ က…နေရာတွေဖြစ် တဲ့…စားသောက်ဆိုင်တန်းတို့…အာရ်စီ… .စာကြည့်တိုက်ရှေ့…ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမရှေ့….အဲသလိုနေရာတွေမှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးထိုင်နေကြတယ်…တူရာတူရာ အစုလေးတွေဖွဲ့…တီးတိုးကိုယ်စီနဲ့…တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ရင်း…သူနဲ့ကိုယ်မသိတောင်မှ…အ ကြည့် ချင်းဆုံမိသွားရင်…လက်မထောင်ပြတာမျိုး……..
အပေါင်းသင်းများတဲ့ ကျနော်တို့ ဒီတခါတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်….ကျနော် ကိုဇာဂနာနဲ့တွေ့တော့ကျနော်တို့လှုတ်ရှားနေတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုတီးတိုးဖွင့်ပြောပြတယ်…ဖြစ်ချင်တော့..သူက လည်း..သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့လှုတ်ရှားနေတာကိုး….ကျနော်တို့ကိုအကူညီပေးတယ်….ကျနော်ကမြို့ကတယောက် ဆီကနေကဗျာစာအုပ်တအုပ်ယူလာတယ်…ဗားတော့ဂရက်ကဗျာတွေ…အဲဒီထဲက..ကဗျာတွေကို…လက်ရေး တွေနဲ့ကူးရေးတာကူး…နောက်ဖရောင်းစက္ကူပေါ်မှာ..ကညစ်တံနဲ့ရေး…မှင်သုတ်…မီးချောင်းနဲ့လှိမ့်ပြီး…ကော် ပီ တွေပွား…..ညဘက်လူခြေတိတ်ချိန်ဆို…အုပ်စုလိုက်ခွဲပြီး…တက္ကသိုလ်ဝန်းနေရာအနှံ့မှာစာတွေလိုက် ကပ်ကြ တယ်…..ကျနော်တို့လိုပဲ…အခြားသောအုပ်စုတွေကလည်း..သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ လှုပ်ရှားနေ ကြ တာ…. ဒါပေမဲ့…တအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုမပေါင်းဆုံမိကြသေးဘူး……….အာရ်စီထဲမှာ…အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး စာတွေ….ကပ်တော့… ကျနော်တို့က သုံးဖွဲ့ခွဲထားတယ်….တဖွဲ့က ကပ်…တဖွဲ့က ကင်းစောင့်....အဲဒီ ကင်းစောင့်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ ကျန်တဖွဲ့ကပေါင်းပြီး…အဲဒီ့စာကိုဝိုင်းအုံဖတ်ပေးရတယ်…နောက်တော့ …ကျောင်းသား အုပ် ကတဖြေးဖြေးနဲ့များလာ…စာထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုကျနော်တို့ကအသံကျယ်ကျယ်နဲ့ထောက် ခံဆွေးနွေးပေါ့…တချို့ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေဆို မှတ်စုနဲ့လိုက်ကူးတာတောင်ရှိတယ်… ( သူတို့ ကလည်း ဆက်ဖြန့်ဘို့များပါတယ် ) ကော်ပီဆိုင်တွေလည်းသွားမကူးရဲဘူးလေ….ဒီလိုနဲ့.. မကြာလှတဲ့တနေ့မှာတော့….ကျနော်တို့အင်းဝဆောင်ပေါ်မှာရှိနေခိုက်…ကျောင်းသားတွေရဲ့အော်ဟစ်သံတွေ…ဆူညံထွက်လာတယ်…အာရ်စီရှေ့မှာကျောင်းသားတွေ…ဆန္ဒစပြပြီ…..ကျောင်းဝန်းအတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေ….အဲဒီနေရာဆီကိုစုပြုံရောက်လာကြတယ်….
ကျောင်းဝန်းအတွင်းမှာစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြကြတယ်……အာရ်စီရှေ့မှာဟောပြောလုပ်တယ်……ကျောင်း သားတွေ တယောက်ပြီး တယောက်ဟောပြောကြပေါ့….ဇွန်လ ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့ မှာ…ထင် ရှားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကတော့….မောင်မောင်ကျော်(ယခုအမေရိကံနိုင်ငံ)ပါ။နောက်မိုးသီးဇွန်…. .ကိုကို လတ်အစရှိသူတွေပေါ့…..ဇွန်လကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့မှာထူးခြားတာက…ကျောင်းသား အရေးလှုပ် ရှားမှုတင်မကတော့ပဲ…ဒီထက်တဆင့်မြှင့်တဲ့…နိုင်ငံရေးဆီလှမ်းတက်ခဲ့ကြတယ်……ဒီမိုကရေစီသဘောတ ရားဟာ… ဇွန်ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမှုမှာ စတင်အမြစ်တွယ်ခဲ့ပြီ…….ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားတွေ ကိုပြန်လွှတ်ပေး ဘို့ကို တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်…….ဇွန်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု မှာ…အရေးကြီးတဲ့မူ တခုကိုချနိုင်ခဲ့တယ်….ဒါကတော့…….. “ ကျောင်းသားသပိတ်မှသည်….အထွေထွေသပိတ်ကြီးဆီသို့ ” ဆိုတာပါပဲ…..
နောက်မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမဆလအစိုးရဟာသုံးနေကြဗျူဟာအတိုင်း…ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့ဖြစ် လာတဲ့အခါတိုင်းမှာ…ကျောင်းပိတ်တဲ့..စနစ်ကိုအမြဲလုပ်တယ်….ကျောင်းတွေကိုပိတ်လိုက်ပြီ………..ကျနော် တို့ကျောင်းသားအစုတွေကွဲပြားသွားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့……ဆန္ဒပြကျောင်းသားအများစုကြီးက..ကျောင်း ၀န်းအတွင်းကနေပြင်ပကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်……ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းမယ်….ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီး တလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြတယ်…ဒီချီတက်ဆန္ဒပြပွဲမှာ..အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကကျောင်း သူကျောင်းသားလေး တွေပါပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်….စမ်းချောင်းမြေနီကုန်းအရောက်မှာလုံထိန်းကားတွေနဲ့.. ၀င်တိုက်လို့သေကျေခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိခဲ့ပါတယ်……..ဒါကိုမခံနိုင်တဲ့…လူအုပ်ကြီးက…လုံ ထိန်းတွေမောင်းလာတဲ့ကားကိုအတင်းဝင်တက်ပြီး…ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့…လုံထိန်းရဲတွေကိုသတ်ဖြတ်ပစ် လိုက်ကြတယ်….ကျနော်မှတ်မိသလောက်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရှေ့အရောက်မှာ…တခါလုံထိန်းအလောင်းတွေ ကိုတင်လာတဲ့ကားကိုပါ..လူအုပ်ကြီးက…မီးနဲ့ရှို့ ပစ်လိုက်တယ်…..မဆလ အစိုးရက ရန်ကုန်မြို့ကိုပါ အရေးပေါ်အခြေနေ(ပိုဒ်မ၁၄၄ ) ထုတ်လိုက်တယ်လေ…..
ဒါပေမဲ့…ဒီတချီလည်း….အာဏာရှင်များဘက်က…အသာရနေဆဲပါ……ကျောင်းသားလှုတ်ရှားမူ့ကို အောင်မြင် စွာချေမူန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်………အာဏာရှင်တို့မချေမူန်းနိုင်လိုက်တဲ့…အရာကတော့….နယ်အရပ်ရပ်ကို ပြန်သွားကြမဲ့…ကျောင်းသားများရဲ့အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓါတ်များကိုတော့သူတို့…..မချေမူန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး…….
အပိုင်း ( ၂ ) ဆက်ပါဦးမည်……